लघुकथा: माफ मागिन् - Naya Online
लघुकथा: माफ मागिन्
शनिबार, भदौ १९, २०७८ (September 4th, 2021 at 10:09am ) साहित्य
अरुणबहादुर खत्री “नदी”
एकदिनको कुरोे हो सम्झनाले आफ्नो श्रीमान् मधुसुदनलाई “मेरो ब्याग किन चलाएको मेरोे ब्याग चलाउन हजुरलाई लाज लाग्दैन” भनिन् । मधुसुदनले “मैले तिम्रो ब्याग चलाएको नै छैन तिम्रो ब्याग किन चलाउने मैले ?” भन्यो । “हजुरले मेरो ब्याग नचलाउनु भएको भए मेरो ब्यागभित्रका जरुरी कागजपत्र कसरी हराए त ?” सम्झनाले भनिन् ।
“तिम्रो ब्यागभित्र के के थियो ? कहाँ हरायो त ?” मधुसुदनले भन्यो । “मेरो ब्यागभित्र मेरो नागरिकता मेरो गाडी चलाउने लाइसेन्स थियो दुबै छैन नि त” सम्झनाले भनिन् । “श्रीमतीको ब्याग श्रीमान्ले छुन नपाइने कही लेखेको छ र ? त्यही पनि तिम्रो ब्याग मैले छोएको नै छैन अन्त कतै राख्यौ कि तिम्रो जरुरी कागजपत्र” मधुसुदनले भन्यो ।
“तिम्रो अर्को ब्याग पनि छ नि हैन ? अर्को ब्यागमा राख्यौ कि एकचोटी अर्को ब्याग खोलेर हेर त” मधुसुदनले भन्यो । मधुसुदनले त्यसो भनेपछि अर्को ब्याग खोलेर हेरिन् नागरिकता र लाइसेन्स अर्कै ब्यागभित्र राखेकी रहिछिन् । नागरिकता र लाइसेन्स अर्को ब्यागभित्र भेटिएपछि सम्झनाले दुबै कानमा समाएर “मैले हजुरलाई मेरो ब्याग छोएको भनेर दोष लगाए सरी है” भन्दै माफ मागिन् ।
सामाखुसी मार्ग, सरकारी धारा, काठमाडौं